ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်း ယူကေတက္ကသိုလ် Coventry ရဲ့ သင်ရိုးတွေကို စင်္ကာပူ PSB Academy မှာ တက်ရောက်နိုင်
Coventry University, UK ဟာဆိုရင် ဗြိတိန်မှာသာမက ကမ္ဘာ့ပညာရေးလောကမှာပါ ထိပ်တန်းအဆင့်က ရပ်တည်နေတဲ့ ခေတ်မီတက္ကသိုလ်တစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ပြည်တွင်းမှာရော နိုင်ငံတကာမှာပါ ဆုတံဆိပ်တွေများစွာဆွတ်ခူးထားပြီး ကျောင်းပြီးတာနဲ့ နိုင်ငံတကာမှာ လုပ်ငန်းခွင်တန်း ဝင်နိုင်စေမယ့် အနာဂတ်ပညာရေးစနစ်သစ်တွေနဲ့ သင်ကြားပေးလျက်ရှိတဲ့ တက္ကသိုလ်ဖြစ်တာကြောင့် နာမည်ကျော် တက္ကသိုလ်တစ်ခုအဖြစ်ရပ်တည်နေနိုင်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံကကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ ဒီလိုကမ္ဘာ့အဆင့်တက္ကသိုလ်တစ်ခုကို ယူကေထိသွားတက်ဖို့ဆိုရင် ကုန်ကျစရိတ်အရ များစွာကြီးမြင့်မှာပါ။ သတင်းကောင်းတစ်ခုကတော့ Coventry University ရဲ့ သင်ရိုးတွေကို ယူကေထိသွားစရာ မလိုဘဲ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့အိမ်နီးချင်း စင်္ကာပူနိုင်ငံမှာတင် ကုန်ကျစရိတ်သက်သက်သာသာနဲ့ တက်ရောက်ပြီး အဲဒီတက္ကသိုလ်ကချီးမြှင့်တဲ့ အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်တွေကို ရယူနိုင်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အာရှဒေသတွင်းမှာ ထိပ်တန်းကရပ်တည်နေတဲ့ PSB Academy ဟာ Coventry University, UK နဲ့ မိတ်ဖက်တက္ကသိုလ်တစ်ခုဖြစ်တာကြောင့် အဲဒီလိုအခွင့်အရေးကို ရရှိနိုင်တာပါ။
Coventry University ဟာ ယူကေရဲ့ထိပ်တန်းတက္ကသိုလ်စာရင်းမှာ နံပါတ် ၁၅ ချိတ်ပြီး သင်ကြား၊သင်ယူမှုအရည်အသွေး ပိုင်းမှာ အဆင့်အမြင့်ဆုံး ရွှေတံဆိပ်ရရှိထားတဲ့တက္ကသိုလ်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် တက္ကသိုလ်လမ်းညွှန်တွေစာရင်းမှာ ယူကေ ထိပ်တန်းခေတ်မီတက္ကသိုလ်အဖြစ် ၇ နှစ်ဆက်တိုက်သတ်မှတ်ခံထား ရပြီး ကြယ် ၅ ပွင့်အဆင့်ရှိ တက္ကသိုလ်လည်းဖြစ်ကာ ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်း Young University 250 စာရင်းဝင်ကျောင်း တစ်ကျောင်းလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
Coventry University, UK နဲ့ စင်္ကာပူ PSB Academy တို့ဟာ ကျောင်းသားတွေ သက်ဆိုင်ရာဘာသာရပ်မှာ အမှန်တကယ်လက်တွေ့တတ်မြောက်မှုကို ဦးစားပေးသင်ကြားတဲ့ အနာဂတ်ပညာရေးစနစ်နဲ့အညီ သင်ကြားတဲ့ ကျောင်းတွေ ဖြစ်ကြတာကြောင့် ကမ္ဘာတဝမ်းက ထိပ်တန်းကုမ္ပဏီကြီးတွေမှာ ရာထူးအဆင့်မြင့်မြင့်နဲ့ လုပ်ငန်းခွင်ဝင်နိုင်တဲ့သူတွေကို နှစ်စဉ်မွေးထုတ်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။
Coventry University မှာ ဘာသာရပ်အလိုက် ဘွဲ့ နဲ့ ဘွဲလွန်အတန်းတွေရှိတာကြောင့် ကိုယ့်ရဲ့ပညာအရည် အချင်းနဲ့ ကိုက်ညီမယ့် အတန်းတွေကိုရွေးချယ်တတ်ရောက်နိုင်တဲ့အားသာချက်လည်း ရှိပါတယ်။
PSB Academy မှာတက်ရောက်နိုင်တဲ့ Coventry University ရဲ့ဘာသာရပ်တွေကတော့ -
5. International Hospitality and Tourism Management
8. Engineering (Mechanical or Electrical & Electronic)
9. Global Logistics & Supply Chain Management
10. Media & Communications
UK Coventry University ရဲ့သင်ရိုးတွေကို စင်္ကာပူ PSB Academy မှာတက်ရောက်ဖို့စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင် အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကို www.psb-academy.edu.sg မှာဝင်ရောက်လေ့လာနိုင် သလို PSB Academy Myanmar Outreach ရဲ့ဖုန်းနံပါတ် 09-795381278 ကိုဆက်သွယ်ပြီးဖြစ်စေ၊ PSB Academy Myanmar Outreach ရဲ့ Facebook Page => https://www.facebook.com/pg/PSB.Academy.Myanmar ရဲ့ Message မှတဆင့်ဖြစ်စေ ဆက်သွယ်စုံစမ်းမေး လို့လည်းရပါတယ်။
(ဒီသတင်းကို PSB Academy မှပံ့ပိုးကူညီထားပါတယ်)